Afgambi la sheegay in uu ka dhacay Burundi - BBC News Somali
Image caption Madaxwaynaha waxa uu joogaa Tanzania waxa uuna la kulmay madaxda kale ee Bariga Afrika
Madaxwaynaha Burundi oo Twitter kiisa isticmaalaya ayaa sheegay in uu dhacay iskuday afgambi laakiin lagu guul daraystay xaaladduna ay dagantahay
Booliiska ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa iyo rasaas ku riday dad ku dibadbaxaya caasimadda Bujumbura Maanta.
Image caption Shacabka oo faraxsan ayaa isugu soo baxay wadooyinka
shacabka oo aad u faraxsan ayaa sheegay uu midho dhalay dadaalkoodii iyo mudaaharaadyadii ay todobaadyada wadeen.
Image caption inkasta oo ay farxaddu socoto ma cada macada afgambiga la sheegay
Image caption Qaxooti Burundis ah oo u qaxay Tanzania
Tobanaan kun oo reer Burundi ah ayaa u qaxay dalalka dariska ah todobaadya dii u dambeeyay.
51 jirkan horay u ahaa hogaamiye jabhadd waxa uu ku doodayaa in markii koobaad ay baarlamaanku doorteen 2005, sidaas daraadeedna aan loo xisaabinaynin, oo uu xaq u leeyahay labo jeer oo shacabku doortaan.
Dastuurka dalkaasi waxa uu dhigayaa in madaxwaynuhu uu xilka qabankaro labo jeer oo kali ah, laakiin sida uu wax u fahmay Nkurunziza waxaa ku raacday maxkamad oo u ogolaatay in uu tartami karo